နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကြာအပြီးမှာတော့ အမေရိက ဈေးကွက်ကနေ နှုတ်ဆက်တော့မယ် Volkswagen Golf ! – MyMedia Myanmar
နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကြာအပြီးမှာတော့ အမေရိက ဈေးကွက်ကနေ နှုတ်ဆက်တော့မယ် Volkswagen Golf !
အမေရိကဈေးကွက် အတွင်း Hatchback အမျိုးအစား တွေကို အရူးအမူး ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ရတဲ့ ခေတ်ကတော့ ကုန် သွားခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်က နာမည်ကြီး Hatchback တွေကို ရောင်းချခဲ့ရတဲ့ အထဲမှာ Volkswagen ထက် ပိုမို များပြားတဲ့ လုပ်ငန်းဆိုတာ ကိုလည်း မပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက် ကြာလာခဲ့ပြီး မှာတော့ အမေ ရိက ဈေးကွက်ထဲမှာ Volkswagen Golf ကား အစီးရေ ပေါင်း ၂.၅ မီလီယံလောက် အထိကို ရောင်းချခဲ့ရတာပါ။ အဆိုပါ အမေရိက ဈေးကွက်အတွက်ကို မိသားစုစီးကားတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး အဆိုပါ ဂျာမနီကားကုမ္ပဏီ ကတော့ အကောင်းဆုံး ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု အချိန်မှာ အကောင်းဆုံး သတင်း တစ်ခု ကတော့ Golf GTI နဲ့ Golf R Performance Models တွေကို အခု ဈေးကွက်ထဲမှာ ဆက်လက် ရောင်းချမှာ ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ လောက်မှာ အဆုံးသတ် နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု အနေအထား အရတော့ 2021 Model Year ဟာ အမေရိက ဈေးကွက် အတွက် Standard Golf ကားအသး တစ်စီး ကို ဝယ်ယူနိုင်မယ့် နောက်ဆုံး အခွင့် အရေး လို့ပဲ ဆိုရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကမှာ တကယ်ကို အောင်မြင်တဲ့မှတ်တမ်း တစ်ခုကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကာ မိသားစုစီး ကား ကောင်း တစ်စီး အဖြစ်လည်း ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ Golf အတွက်တော့ အခုလို ထုတ်လုပ်ရေးတွေ ရပ်ဆိုင်းရတော့မှာ တကယ်ကို ဝမ်းနည်းစရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ အမျိုး အစားကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၄ ခုနှစ် လောက်မှာ စတင်ခဲ့ တာ ဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး မျိုးဆက်ကိုတော့ Rabbit အနေနဲ့ တံဆိပ်ကပ်နှိပ် ခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက်မှာ မှ Golf ဆိုတဲ့ နာမည် ကို စတင် ရရှိလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာ က ၅ ခုမြောက် မျိုးဆက် မှာ Rabbit လို့ နာမည်‌ပြန်ပြောင်းခဲ့ သေးတာ ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၆ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ် လောက် အထိကို ကြာမြင့် ခဲ့ကာ Golf အဖြစ် တော့ 2010 Model Year မှာ ပြန်လည် ပြောင်းလဲခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Volkswagen America ရဲ့ Product Marketing And Strategy အပိုင်းက Senior Vice President ဖြစ်သူ Hein Schafer က‌ ပြောကြား ရာမှာတော့ သူတို့ VW အနေနဲ့ Dynamic ဖြစ်တဲ့ မောင်းနှင်မှု အတွေ့အကြုံ တွေကို ဘယ်လို ကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့လဲ ဆိုတာတွေကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့ ခုနစ်ခုမြောက်မျိုးဆက် Golf ကတော့ အခု ဈေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချမယ့် Hatches တွေထဲက နောက်ဆုံးတစ်စီး ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပြီး GTI နဲ့ Golf R တို့ကတော့ ကုမ္ပဏီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အကောင်းဆုံး ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ Schafer က ထပ်လောင်း ပြော ကြားခဲ့ ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အမေရိက ဈေးကွက်ထဲမှာ နောက်ဆုံး ဖြစ်လာမယ့် Standard Golf Models တွေထဲ က တစ်စီးကို အမိအရ ဝယ်ယူထားနိုင်ဖို့ စဉ်းစားနေမယ့် သူတွေ အတွက်ကတော့ Full Featured TSI Trim အနေ နဲ့ပဲ ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတာ ကို သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပြီး Volkswagen ရဲ့ 1.4 Liter Turbocharged Engine ကို တပ် ဆင်ပေးထားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေ အဖို့ စိတ်ကျေနပ်စရာ တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တာကတော့ ကားမှာ Manual Option ပါ ဝင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး Standard Tiptronic ကိုမှ Eight-Speed Automatic Transmission နဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Manual Transmission နဲ့ ကားက ပိုပြီး ဈေးသက်သာနေတာ ကိုတွေ့ရပြီး $ 23,195 လောက် ကျသင့်ကာ Eight-Speed Automatic Transmission Version အနေနဲ့ကတော့ $ 23,995 လောက် အထိကျသင့်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ Golf ရဲ့ အမေရိက အတွက် နောက်ဆုံးမျိုးဆက် နဲ့ပက်သက်ပြီး အားနည်းသလို ဖြစ်နေရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အရာကတော့ Board Technology ကိုပဲ သုံးပေးထားတဲ့ အချက် ပါ ပဲ။ ဒါပေမယ့် လည်း ဈေးနည်း ပြီး သေးငယ်တဲ့ ကားတစ်စီး လောက်ကိုပဲ ရှာဖွေနေမယ့် သူတွေ အတွက်ကတော့ ဒီအချက်ဟာ စိတ်ပျက် ဖွယ် ကောင်းနေမှာတော့ မဟုတ်ပဲ Golf အနေနဲ့ ဈေးနှုန်းအရရော အရည်အသွေးအရပါ ကောင်းကောင်း ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ အခု လိုနည်းပညာနဲ့ မျိုးဆက် ကလည်း အနည်းငယ် လောက်ပဲ ကျန်ရှိတော့တာ ဖြစ်ပြီး စိတ်ချရတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ကာ ပြန်လည် သိမ်းဆည်း တာမျိုးတွေကို မကြုံရမယ့် အာမခံ ချက်တွေကြောင့် စိတ်ကျေနပ်စရာ ကောင်းနေဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post နှစ်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကြာအပြီးမှာတော့ အမေရိက ဈေးကွက်ကနေ နှုတ်ဆက်တော့မယ် Volkswagen Golf ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-23T15:01:30+06:30January 23rd, 2021|MYCARS MYANMAR|